Iphikiwe eyokuthi uZuma wavinjwa esethi umemezela imfundo yamahhala – LIVE Express
IHhovisi likaMengameli lithi ungamanga aluhlaza umbiko we-Sunday Times ngeSonto othi uMengameli Jacob Zuma wanqandwa yiHhovisi loMgcinimafa esethi uyayimemezela imfundo yamahhala kuleli.
Ngokwalo mbiko, uZuma wayehlose ukwenza lesi simemezelo enkulumweni yakhe ye-State of the Nation Address ngo-February kulo nyaka kodwa wavinjwa yizikhulu zaseHhovisi loMgcinimafa ngokuthi zivele zikhiphe lesi simemezelo enkulweni uMengameli ayezoyithulela isizwe. Lokhu kubikwa ukuthi kwenzeka ngesikhathi uPravin Gordhan esinguNgqongqoshe wezeziMali.
“UMengameli akakaze ahlele ukwenza isimemezelo esinjalo,” iHhovisi likaMengameli lisho kanjalo ngeSonto, lengeza ngokuthi okunalokho i-SONA2017 yayigxile okuqukweni olusheshayo kwezomnotho nelithi kwakugqugquzelwe yiqembu elibusayo i-ANC, i-January 8 statement kanye neKhabhinethi.
Leli Hhovisi liphinde langeza ngokuthi uMengameli waqoka ikhomishana ephenya ngokuthi ingakhoneka yini imfundo yamahhala kuleli neholwa uJudge John Heher, lathi akakaze ahlele ukwenza isimemezelo esizobukela phansi umsebenzi wale khomishana njengoba ebelokhu eyilindile ukuthi iphothule uphenyo lwayo.